वेष्ट फाईनान्सद्वारा संजय कुमारलाई १ तोला सुन हस्तान्तरण « Nepal Bahas
वेष्ट फाईनान्सद्वारा संजय कुमारलाई १ तोला सुन हस्तान्तरण
प्रकाशित मिति : ११ पुष २०७८, आईतवार १२:३५
११ पुस, काठमाडौं । बिद्युतिय भुक्तानी प्रणाली ‘फोन पे’ ले आफनो प्रयोगकर्ता ग्राहकहरुको लागि “क्यू .आर. को गुण एक तोला सुन कार्यक्रम अन्तर्गत सहभागी भई १ तोला सुन प्राप्त गर्न सफल वेष्ट फाईनान्सका निक्षेपकर्ता संजय कुमार सिंहलाई यस फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश सिंह भण्डारीले व्यवस्थापनको उच्च तहका पदाधिकारीको उपस्थितिमा १ तोला सुन उपहार हस्तान्तरण गरे ।
उक्त कार्यक्रममा उपहार प्राप्त गर्न सफल संजय कुमार सिंहले आफुले वेष्ट फाईनान्स कम्पनीमा खाता संचालन गर्दा कम्पनीले उपलव्ध गराएको सुविधा अन्तर्गत क्यू .आर. प्रविधिको प्रयोग गर्दा सुन उपहार पाएकोमा ज्यादै हर्षित हुदै अन्य ग्राहकहरुलाई पनि यो प्रविधि प्रयोग गर्न पे्ररणा दिने जानकारी दिए ।
नेपाल अधिराज्यभर १४ वटा शाखा कार्यालय रहेको यस वेष्ट फाईनान्स कम्पनीले हाल ग्राहकको सुविधा अन्र्तगत विभिन्न डिजीटल बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको लाभांश संशोधन, बोनस बढ्यो ?
बेष्ट फाईनान्सको थतिचोक शाखा लगनखेल बसपार्कसँगै स्थानान्तरण
बेष्ट फाइनान्सको चावहिल शाखा स्थानान्तरण
कुन फाइनान्स कम्पनीले कहिले गर्दैछन् बुक क्लोज ?